RAHARAHA AMBOHIMAHAMASINA : Mbola misy ny tsy matimanota miriaria
Tsy very an-javony akory fa antenaina ho maka toerana fotsiny ihany ilay raharahana an’Ambohimahamasina. Mbola misy ireo tompon’antoka voalaza ho voasaringotra tamin’ity raharaha ity saingy toa afa-maina hatramin’izao. 13 février 2019
Manodidina ny roa taona lasa izay no nipoaka ny raharaha Ambohimahamasina. Kolikoly avo lenta no nataon’ireo olona nitazona andraikitra ambony sy akaiky ny Filoha teo aloha tamin’izany. Volam-panjakana mitentina amina miliara no tsy hita popoka. Nitsikafona ny raharaha ka ramatoa iray mpandraharaha ara-toekarena no tena nifaharan’ny rihitra rehetra izay mbola tsy afaka any am-ponja hatramin’izao. Ity farany irery ihany no natao haza lambo raha mangatsiatsiaka kosa ireo namany niray vilia taminy. Araka ny fantatra anefa dia nisy ireo voatonona ho niray petsapetsa taminy manoloana io kolikoly bevava nataony io.
Anisany re tamin’izany ny anaran’ i Mahafaly Solonandrasana Olivier izay tompon’andraikitra voalohany teo anivon’ny minisiteran’ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana nandritra ny fitondrana teo aloha. Hatreto tsy nandrenesam-peo intsony ny tohin’ity raharaha ity, taorian’ny nampidirana am-ponja an’ilay vehivavy mpanolotsaina akaiky ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Nampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ihany ny zava-nisy teo amin’ny fitanilan’ny fandraisana andraikitra. Afa-bela ve i Olivier Mahafaly Solonan drasana Olivier ?
Ankoatry ny raharaha Ambohi-mahamasina dia fantatra ihany koa fa mbola misy afera hafa mahavoasaringotra an’ity minisitra teo aloha ity, izay iarahany amina mpandraharaha hafa iray any Toamasina antsoina hoe A. Marihina fa andro vitsy taorian’ny nanaovana fanadihadiana an’ilay ramatoa isany tompon’antoka voalohany tamin’ity fanaovana kolikoly ity, avy hatrany dia naiditra am-ponja ny tenany. Notazomina efa aman-taonany tany amin’ny fonjan’ny vehivavy ao Manjakandriana izy ary nafindra eny amin’ny fonjan’Antanimora afak’omaly antoandro.